Hay'adda Ganacsiga Adduunka: Musharraxiinta Afrikaanka ah maxay kusoo kordhin doonaan qaaradda? - BBC News Somali
Hay'adda Ganacsiga Adduunka: Musharraxiinta Afrikaanka ah maxay kusoo kordhin doonaan qaaradda?
Diblumaasiyiinta Afrika ayaa rajo ka muujinaya in qof ka socda qaaradda uu la wareego xilkaas ugu sarreeyo ee mid ka mid ah ha'yaddan dhaqaalaha caalamka maamula.
Qof Mareykanka ah ayaa mar kasta hogaamiyo Bangiga Adduunka, halka Yurub na ay mar kasta madax ka tahay Ha'yadda Lacagta Adduunka ee IMF, balse Afrikaanku weligood ma aysan qaban jago kuwaas lamid ah.
Ururka WTO oo uu fadhigiisu yahay magaalada Geneva wuxuu maamulaa ganacsiga adduunka iyo sidoo kale wuxuu xalliyaa muranka dhanka ganacsiga ee soo wajaha dalalka. Sida laga soo xigtay website-ka hay'adda "wuxuu u furan yahay in dhammaan laga wada faa'ideysto ganacsiga"
'Ganacsiga ma ahan gargaar'
Xigashada Sawirka, Getty Images/ERIC PIERMONT
Gabadha Soomaaliyeed ee u tartameysa hoggaanka Ururka Ganacsiga Adduunka
Cadaadiska heysta waddanka uu Sacuudiga ka helo hubka uu kula dagaallamo Yemen?
'Waxaan ganacsigeyga ka bilaabay laba boorso oo dhar ah hadana waxaa ii shaqeysa 40 qof'
Amina Maxamed ayaa ka mid ah musharrixiinta u tartamaya xilka ugu sarreeya ee hay'adda Ganacsiga Adduunka - WTO.
"Gargaarka shisheeye dan uguma jirto Afrika, sida meelaha kale ee dunida, taariikhda waa ganacsiga" waxaa sidaas yiri David Luke oo ah madaxa xarunta siyaasadda ganacsiga ee ka tirsan xafiiska Qaramada Midoobey ee arrimaha dhaqaalaha Afrika.
"Haddaba, qofka caadiga ah ee Afrikaanka ah wuxuu fahmayaa marka qof ay isku jinsiyad yihiin uu hogaaminayo WTO, waxay taasi muujineysa in aan u soo jeedno ganacsiga".
Okonjo-Iweala, oo horey u aheyd wasiirka maaliyadda ee Nigeria ayaa BBC-da u sheegtay in ay dooneyso "in ay aragto sidii lagu heli lahaa haween iyo dhalinyaro ka dambeeya horumarka Afrika si wax badan looga faa'ideysto ganacsiga adduunka."
Waxay dooneysaa in qaaradda ay ka madaxbanaanaato badeecadaha looga soo dhoofiyo dibadda isla markaana "la qiimeeyo badeecadaha laga soo saaro gudaha qaaradda."
"Tusaale ahaan, waxaan boqolkiiba 94 dawooyinka qaaradda laga soo dhoofiyaa dibadda anaga oo gudaha qaaradda ku soo saari karno."
Aamina Maxamed oo horey u soo noqotay wasiirka ganacsiga iyo arrimaha dibadda Kenya waxay BBC-da u sheegtay in haddii ay ku soo baxdo tartanka "ay waji cusub oo loo dhan yahay ku soo kordhin doonto WTO."
"Waxaan rajo wayn ka qabaa in la igu tirin doono hogaamiye khibrad leh oo haween ah Afrikana ka soo jeeda."
Cabdel Xamiid Mamduux oo Masar u matalayay ururka WTO, tan iyo sannadkii 1985-tii ayaa sheegay in khibrad durugsan uu u leeyahay hay'addan maamusha ganacsiga dunida, taa oo u horseedi doonta in uu caawiyo qaaradda Afrika.
"Ajanddaheyga Afrika wuxuu yahay in aan ku dadaali doono in dadka Afrikaanka ah ay ka dhex muuqdaan nidaamka ganacsiga."
"Waxaan sidoo kale ugu baaqi doonaa hogaamiyeyaasha siyaasadda Afrika inay diiradda saaraan siyaasadahooda ganacsiga."
Magacyada musharraxiinta u tartameysa agaasimaha guud ee WTO
Maxamed Maziad Al-Tuwaijri - Sacuudi Carabiya
Cabdel Xamiid Mamduux - Masar
Aamina Maxamed - Kenya
Si kastaba, marka ay timaaddo in Afrika laga caawiyo in ay gaarto heshiiska ganacsiga xorta ah - waxaa kaalin weyn ka qaadan kara Ururka Ganacsiga ee Adduunka.
Heshiiska, dhaqangelintiisa oo uu hakad geliyay cudurka safmarka Korona, waxaa la filayaa in lagu dhawaaqi doono aag ganacsi oo xor ah ee ugu weyn dunida.
Dhexdhexaadinta khilaafka ganacsiga Shiinha iyo Mareykanka
Dagaalka ganacsiga ee ka dhexeeyo Shiinaha iyo Mareykanka iyo siyaasadda madaxweyne Trump waxay u muuqdaan in dib u dhac ay ku yihiin fikradda ah ganacsiga xorta ah. Xayiraadaha ka hortagga fiditaanka fayraska Korona waxay saameyn ku yeesheen isu gudbinta badeecadaha ganacsiga.
Dagaalka ganacsiga ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha
Dedaalka ururka ee ku saabsan hirgelinta xeerar cusub oo ay ku heshiiyaan ayaa caqabad noqday, sannadkii 2001-dii.
Ururka WTO wuxuu bilaabay heshiisyo kale oo lagu gaaray magaalada Dooxa. Waxaa la filayay in halkaas looga dhawaaqo isbeddallo cusub oo lagu caawinayo dalalka soo korayo, balse wuu guuldareystay heshiiskaas.
Waan arrin u taalla qofka hogaamin doona WTO, bisha November ee sannadkan.
Shaqada ugu weyn ee laga sugayo cidda loo dooran doono agaasimaha ha'yaddan waxay tahay in dib uu u soo celiyo fikraddii iyo aaminaaddii laga heystay Ururkan.
Qadar oo cabasho ka gudbisay waddamada xayiraadaha ku soo rogay
31 Agoosto 2018